जिन्दगीमा पैसा नै कमाउन सकिन भनेर तनावमा हुनुहुन्छ ? एक मुट्ठी चामलबाट यसरी पाउनुहोस् चमत्कारीक लाभ – Gazabkonews
जिन्दगीमा पैसा नै कमाउन सकिन भनेर तनावमा हुनुहुन्छ ? एक मुट्ठी चामलबाट यसरी पाउनुहोस् चमत्कारीक लाभ
केही दिनमै समस्या समाधान हुन्छ। पैसा कमाउन नसकेर तनावमा हुनुहुन्छ भने आधा किलो चामल लिएर एकान्तमा शिवलिंगको अगाडि बस्नुस् ।
भाईरल सचिनले एक महिनामा नै कमाए लाखौँ रुपैयाँ, हजार रुपैयाँको नोटको बिटो देखेर छक्क परेका सचिनले मेरी बास्सै खेल्दै , सचिनलाई यसरी घेरा हाले मेरी बास्सैका कलाकारहरुले, हेर्नुहोस् यो रमाइलो भिडियो
सचिन पारीयार एक चर्चित नाम हो । गुल्मी देखी उन्को भिडियो भाईरल भएसी उनी काठमाडौं आएको थियो । उन्लाई सपोर्ट र मिडिया लाउने नाम हो मोहन बस्नेत ,मोहन बस्नेत एक कुसल र चर्चित पत्रकार हुन । उन्ले अहिले धेरै नयाँ प्रतिभाहरु सामाजिक सन्जाल मा ल्यएर उनिहरु को जीवन खुशी बनाइसकेको छ ।
सचिन ले इन्द्रेनी सम्म गाएर दर्सक स्रोता को मन जिती सकेको छ । सचिन पारीयार आज भने मेरी बास्सै खेल्न गाएको छ् । सचिन ले दारी बा गोक्ते काजी लाई समेत हसायो । आउनुश हेरै यो भिडियो जुन भर्खरै सार्बजानिक भएको छ ।
यो पनि : २० वर्षपछि मिडियामा आउँदा श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई सम्झदै रोइन राजमति (हेर्नुस् भिडियो)
काठमाडौं– सन् १९९५ मा बनेको एकदमै चर्चित नेवारी फिल्म हो ‘राजमति’ । निर शाहले निर्देशन गरेको यही फिल्मबाट चर्चामा आएकी कलाकार हुन्, हिसिला महर्जन् । जसले यो फिल्ममा अभिनेता श्रीकृष्णसँग जोडी बाँधेर ‘राजमति’को भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् ।
आइतबार किर्तिपुरमा राजेन्द्र खड्गीको नयाँ फिल्मको सुटिङ भइरहँदा एक्कासी ‘राजमति’कै अवतारमा आइपुगिन्, हिसिला । २० वर्षपछि राजमतिको अवतारमा देख्दा सबै चकित भए । हिसिलाले पनि राजमतिका किस्सा र डायलग सुनाउन भ्याइन् । स्वर्गिय अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई समेत सम्झिइन् ।
यो पनि : उखु किसानले सबै रकम भुक्तानी पाएनन्ः भुक्तानी नभए आन्दोलन